Filtrer les éléments par date : vendredi, 17 septembre 2021
vendredi, 17 septembre 2021 20:51
Maninona raha sokafana ny fihariana volamena
Sokafo ny seham-pamokarana sy fanodranana volamena, dia mandeha amin'ny ara-dalàna avokoa ny rehetra, sady mahazo vola ireo Malagasy mpitrandraka sy mpisehatra amin'ny volamena miisa 5 tapitrisa, no idiram-bola ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra.
Izao lasa resaka an-tsokosoko sy kilalaka ary rallye tsy misy bedy daholo no miainga.
vendredi, 17 septembre 2021 20:43
Fandriampahalemana : Mpanendaka mirehareha fa efa kilalaony eny Antanimora
Mpanendaka voasambotry ny Polisy eny Antaniavo Antohomadinika, ary natolotra ny Fitsarana Ambaratonga voalohany Anosy ny 25 Aogositra 2021, ary nidoboka am-ponja, dia afaka sahady, ary nanendaka indray.
Mirehareha mihitsy ireo mpanendaka fa hoe : ho sasatra ny Polisy hisambotra azy fa raha eny Antanimora efa kilalaony, satria misy mpikarakara hono izy ireo ao ka mivoaka miditra.
Tanora herotrerony 16 ka hatramin’ny 23 taona izy ireto, mpitsindrona zavamahadomelina mahery vaika, efa gadra lava noho ny fanendahana amin'iny manodidina an’Antohomadinika iny.
vendredi, 17 septembre 2021 20:21
Dola Perline : Vehivavy tokana mpihanika andrin-jiro eo anivon’ny JIRAMA
Injeniera nivoaka tao amin’ny Oniversite Polyteknikan’Antsiranana i Dola Perline. 30 taona ity farany, isan’ireo vehivavy teknisiana miasa eo anivon’ny orinasam-panjakana Jirama.
Vehivavy tokana mpihanika Andrin-jiro eo anivon’ny JIRAMA i Dola Perline. Ao amin’ny sehatry ny Fitsinjarana Herinaratra JIRAMA Antsiranana no misy azy, misahana ny « branchement, tirage des lignes, dépannage, … ».
Nanaitra ny maro ny nahita an’i Perline nandritry ny asa fametahana jiro manazava ny tanàna teo Ramena Antsiranana.
Mendrika ho deraina ny vehivavy toa an’i Perline, hoy ny Minisitry ny Angovo sy ny Akoranafo, Andry Ramaroson.
Noraisin’ny Minisitra an-tanana ny fanohizan’i Perline ny fianarany any ivelany, hananany ny mari-pahaizana « Doctorat en génie électrique ». Aorian’ny fahavitàn’i Perline ny fianarany, hanohy hiasa eo anivon’ny JIRAMA hatrany izy ho fampiroboroboana ny herinaratra eto Madagasikara.
vendredi, 17 septembre 2021 20:12
Fananan-tany : Manana ny sarin-tany tena izy raisina avy amin’ny zanabolana i Madagasikara
Efa manana ny sarin-tany tena izy raisina avy amin’ny zanabolana i Madagasikara ankehitriny, ary efa miasa ny fiaramanidina maka ny sarin-tany ahafahana mamoaka bokin-tany sy karatany mifanaraka amin’ny tena izy, mba hisorohana ny resaka fifanitsahana sy adin-tany manerana ny Nosy.
Nivoitra io nandritra ny lanonana fizarana karatany, ny alakamisy 16 Septambra 2021, tao amin’ny Kaominin’i Ambohidranandriana, Distrikan’i Antsirabe II, Faritra Vakinankaratra, izay notarihin’i Atoa Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Sampandraharahan’ny Fananan-tany.
Karatany miisa 22 200 no voazara, ka Kaominina miisa dimy no nisitraka izany, dia Ambohidranandriana, Ambatomena, Ambohitsimanova, Tsarahonenana Sahanivotry ary Ambohimiarivo.
17 septembre : Journée Mondiale de l'Arthrose.
Tompon'andraikitry ny Tanora Mpianatra Kristianina (TAMPIKRI) isaky ny Diosezy Katolika manerana ny Nosy.
Bevalala 17 septambra 2021.
Misaotra an'ireo Eveka manerana ny Nosy, misaotra ireo Pretra sy Relijiozy, ny Aumonier, ireo Zoky mpiara-dia, ny Birao Nasionalin'ny TAMPIKRI, ary indrindra ireo solotenam-paritra TAMPIKRI manerana ny Nosy.
Mijery - Mitsara - Miasa
(Voir - Juger - Agir).
vendredi, 17 septembre 2021 19:59
Nivory taty Sambava, niaraka nikaro-bahaolana hanavotana ny lavanila malagasy ireo mpisehatra amin’io seha-piharina io.
Mikatso ny vokatra, ambany vidy. Niverimberina tamin’ny fanehoan-kevitra ny hanalalahana ny vidin’ny lavanila fa tsy ho feran’ny fanjakana toy ny misy ankehitriny, ary izany rahateo no voalazan'ny lalàna mahakasika ny sehatry ny lavanila.
Naniry koa ireo mpivory, mba aty ifotony no iarahan’ny mpitondra fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra amin’ity lalampihariana lavanila ity manapa-kevitra.
Niandry moa ireo mpivory mba ho avy ny praiminisitra sy ny minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, saingy tsy nisy tonga, na efa nisy fiaramanidina manokana nomanina hitondra azy ireo aza, hoy ny loharanom-baovao.
Na izany aza dia hatolotr’ireo mpivory ny fanjakana foibe ny fehin-kevitra nivoaka tamin’ity fivoriana natao androany ity.